Chatbots - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Chatbots ari kuve akakosha kumabhizinesi kuitira kuti agadzirise kudyidzana kwevanhu. Basa revatengi inzvimbo imwe chete iyo mabhatani anogona kuve anobatsira zvisingaite, kunyanya sezvo kazhinji kazhinji pasina basa revatengi revanhu rinowanikwa. Chigadzirwa rutsigiro uye anozvishandira-ega masevhisi ndeimwe nzvimbo iyo chatbots inogona kuuya inobatsira. Imwe yezvakakosha zvigadzirwa izvo zviri kuwedzera mukushandiswa nemabhizinesi. Kubatsira otomatiki kudzoka kwehofisi mabasa uye kununura vatengi rutsigiro kuburikidza otomatiki mhinduro kune vatengi kubvunza uye zvikumbiro. Kuti unyatso tora mukana weiyi chatbot maficha emabhizinesi anoda kuisa mari mukugadzira chatbot zano. MaChatbots ari kuramba achiwedzera kukosha sezvo mabhizinesi achitsvaga kugadzirisa kushamwaridzana kwevanhu sezvo vanhu vazhinji vasingachabatana nevanhu kuburikidza nekufona. Chatbots inokura mukukosha sezvo mabhizinesi achitsvaga nzira dzekudzikisa mutengo nekugadzirisa kumashure maitiro ehofisi nekudaro achisunungura vashandi zviwanikwa. Chatbots inovavarira kuendesa yakagadziriswa mushandisi ruzivo kune wekupedzisira mushandisi pasina kudikanwa kwekutaurirana kwevanhu
Chii chiri muChatbot?
Chinhu chekutanga chaunoda kuti unzwisise ndechekuti chatbot chii. Chatbots mapurogiramu emakomputa anokwanisa kutevedzera uye kutevedzera kutaurirana kwevanhu mune software. Izvi zvinogona kuzobva zvashandiswa kuita akasiyana siyana mabasa. Mabhatani anogona kuteerera, kunzwisisa mutauro wevanhu, uye kuita zvinoshamisa pakupindura mibvunzo nekuita nyore mabasa. Zvinonzwika semuroti mutengi webasa rebasa chero remhando huh? Kuti unzwisise mashandisiro emakambani makuru ehunyanzvi akashandisa chatbots zvinobatsira kusvetukira kumusoro mukusimudzira chatbot. Sezvaungave iwe uchiziva, ma chatbots pane imwe nguva aishandiswa zvega nemakambani makuru asi izvozvi ari kuenda munzvimbo dzakasiyana siyana makambani seyekutengesa, nezveutano, kushambadzira, eCommerce, nzvimbo dzekufona, nezvimwewo Nhasi, chatbot iri kuramba ichishandiswa kune akasiyana maindasitiri senge mabasa emari, SaaS services, pamusoro peinternet, nezvimwe. Pat Flynn weFalcon Systems anotizivisa kuti yanhasi chatbot inogona kutariswa semutauri wekutaurirana. Mune maonero ake, kuitira kuti chatbot ifungidzirwe sekutaurirana zvirongwa zvinofanirwa: Kunyange iwe uchikakavadzana pamusoro pekuti (uye kusvika papi) izvi zvinodiwa zvichiri kusangana (uye kuti izvo zvinodiwa zvinofanirwa kufungidzirwa zvakare zvichienderana nechishandiso) iyo chokwadi chinoramba chiri chekuti chatbots dziri kukurumidza kukura. Kukura kweBot kuri kutaridzika zvishoma nezvishoma sehunyanzvi hwekuzadzisa chimwe chirongwa chebasa kwete panzvimbo yemubatsiri akazara. Iyo chatbot inogona kuiswa uchishandisa AIML script kana mumutauro wako wega wekusarudza uchishandisa chero yakapusa zvinyorwa zvinyorwa software senge Gmail kana Google Docs. Iyo poindi ndeyekuti maitiro ari pamusoro apa ekupeta script uye AIML kugadzirisa inokurumidza uye yakapusa maitiro zvisinei kuti unogadzira kupi bot yako. Iko kusanzwisisika kwakanyanya ndekwekuti chatbots inongovakwa chete nechinangwa chekushandisa yakafanana kusangana kwehukama maitiro sevanhu kufona nzvimbo kana vatengi vatengi. Sekutaura kwatinoitwa Eric Foster weZapier: "Kubudirira kwe chatbot zvese ndezve kuvaka chirongwa chinogoneka, chinokwenenzverwa chinogona kupindura zvinonzwisisika kuti tikwanise kugadzirisa kudyidzana kwevatengi.
Mabhiza ari kuchinjisa tarisiro yavo kuenda kumachatbots sezvo chatbots iri kukwanisa kuburitsa mari yakawanda kana ichienzaniswa nekudyidzana kwevatengi navo (CSCI Actuarial 2020) Makambani parizvino ari kudyara zvakanyanya mumatauro ekugadzirisa kusangana kwevanhu, kupfupisa tarisiro yebasa revatengi uye kukudziridza kuvimbika kwevatengi. zvirongwa zvinogadzirisa kusangana kwevashandisi. Chatbots ndiwo mamwe emhando dzakakurumbira dzemachatbots uye akave nekukanganisa kwakakura munzira dzebhizinesi, kunyanya mumaindasitiri, inishuwarenzi, mabhizimusi ekutengesa uye maindasitiri ehutano.
Vashandi vezvemagariro pavakatanga kutaura nevana vavaivachengeta, vaive vasina nzira yekunzwisisa kana kutaura mutauro wavakange vachidzidza mumakirasi akarongeka. Iyo nharaunda haina kugadzirirwa kuti ivabvumire ivo kuti vabudirire kusanganisa munzvimbo yechikoro nharaunda. Mazuva ese vana vaibvunzwa kuti vapindure pakubatana kwavo nemumwe mudzidzi vachishandisa zita chairo. Izvo hazvo hazvina kuvabatsira kuti vakudziridze nzwisiso yemamiriro epamoyo evamwe muchikoro uye uku kushayikwa kwekunzwira tsitsi ndiyo imwe yenyaya dzinowanzotaurwa navo. Vana vakaona zvakaoma kuti vaone tsika nemagariro echikoro mukukura uye izvi zvakaita kuti zvivaomere kuva nehunhu hwekuva wega. Kudzidza mune mumwe mutauro waive mumwe wematambudziko akajeka avakatarisana nawo vakakomberedzwa nemutauro wemumwe mutauro, uyo pamwe chete nekutya kupotsa musoro wenyaya wakavamanikidza kuti vadzidze zvemagariro kubva pamutauro wavanga vasina kudzidza chirongwa chedzidzo (Semple, Moore & Green, 2012) Mumakore anotevera, panguva yedenda repasi rose, izvi zvakafanana magariro zvakatarisana nevabereki vevana avo vaisakwanisa kusangana nemabatirwo echikoro. Vabereki ava vakasangana nematambudziko ekutaura nevana vavo uye kazhinji vaizviwana vachifanirwa kutsanangura zvakadzama zvavaidzidza uye vaisazokwanisa kuunza chero ruzivo rwekunze, kana paine, navo pavaitaura nevazukuru vavo. Kudzidza mumutauro usiri-wekuzvarwa kwaive rimwe dambudziko ravakatarisana naro. Kugadzira nharaunda senge yekumisikidza pamba apo muchengeti akataura nemwana mumutauro uyo muchengeti aidzidza yaive rimwe dambudziko rakaburitswa nemutauro mutsva uyu, kana vakatadza kugadzikana mumusha mavo nemutauro mutsva.
Pakapararira denda repasirese, mabhizinesi mazhinji akarasikirwa nevavanotengesana navo, vatengi uye kuvimba nevatengi vavo uye vaifanira kuzvigadzira patsva. Hutsika mameseji ezuva nezuva aunogamuchira anoenderana nechinangwa chaicho. Kune zvakati wandei zvebhenefiti pakuita tsika, kusanganisira zvambotaurwa pamusoro pekugadzirisa kwemabasa, kuchengetedza mari, uye kuona kubatana nevamwe.